Xog: Qaabkii loo abaabulay Qarixii Guriceel iyo Ciddii ka dambaysay. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated May 25, 2019
Tan iyo markii ay Xoogaga Ahlu Sunna Wal Jameeca fashiliyeen Qarixii Guriceel waxaa isi soo taraya Macluumaadka ku saabsan sida loo abaabulay Qaraxaasi iyo cidda ka dambaysay.
HornAfrik waxay ogaatay in Qaraxan lagu soo diyaariyay Deegaano ku teedsan Ceelbuur oo ay ku sugan yihiin Maleeshiyadda Alshabaab, Waxaana Qofka is qarxinaya laga soo diray Gobalka Shabeelaha Hoose oo muddooyinkan uu ku sugnaa, isagoo sugayay in loo diro goob uu isku qarxiyo.
Ismiidaamiyaha ayaa ka soo jeeda Qabiilka Raxanwayn, Waxaana loogu talagalay inuu isku qarxiyo Munaasibadda, gaar ahaan goobta ay fadhiyeen Macalin Maxamuud, Sh Shaakir iyo Sh Ashcari, si midkoodna uusan goobta uga fakan.
Sidee loo abaabulay Qaraxa,?
Alshabaab marna rajo kama qabin inay si fudud ku geeyaan Qarax Deegaanadda Ahlu Sunna, Waxayna cabsi qabeen in fashil ku dhaco, balse Cabdi Waal oo ah Hogaamiye Kooxeed hore oo ka soo jeeda Guriceel, ayaa la xiriiray Afhayeenka Howlgaladda Kooxda Alshabaab, C/casiis Abuumuscab oo ay Labadooda Hooyo wada dhasheen (Ilmo Habreed). Wuxuuna ku wargaliyay inuu hayo qorshe lagu soo afjari karo Ahlu Sunna, haddii ay diyaariyaan Qof Ismiidaamiye ah Maalinka Shuhudada Ahlu Sunna oo sannad kasta lagu qabto Guriceel.
Cabdi Waali iyo Abuu Muscab waxay ku balameen inay isku soo laabtaan marka uu Kooxda ka soo dhaadhiciyo howshan, kadib maalmo waxa uu Abuu Muscab ku soo xiray Cabdiwaal nin magaciisa lagu sheegay Tabliiq oo ah Madaxa Mukhaabaraadka Alshabaab, kaas oo oo ay isla qaabeeyeen sida weerarka u dhici karo.
Cabdi Waal waxa uu kadib diyaariyay Nin uu Adeer u yahay oo lagu macaabo Cali Dhubad Nuure Siyaad, Kaas oo ka ahaa Guriceel Ganacsade, balse markii dambe musalafay, iskana joogay Xamar. Waxa uu ka dhaadhiciyay inuu qaato Lacag, fuliyana howshan, Wuuna aqbalay Cali soo jeedinta adeerkiis.
Cali Dhubad Nuure Siyaad
Cali Dhubad waxaa loo jaray Ticket Guriceel ah, waxaana horay loo siiyay Lacag $3,000 ah, taas oo loogu shubay Account uu ku lahaa Salaam Bank. Iyadoona loo sameeyay ballanqaad kale oo Lacageed. Waxaana kadib markii uu gaaray Guriceel uu markiiba diyaarsaday Gaari, kaasoo uu ku soo qaaday Ismidaamiyaha.
Cali Dhubad markii uu u soo dhowaa Magaaladda Guriceel, si uusan u fashilmin waxa uu maray wado aan ahayn tan saxda ah ee laga soo galo Magaaladda, isagoo markii uu u soo dhowaa Magaaladda u leexday waddo aado dhinaca Guriga Ugaaska, si uu uga dhuunta Koontaroolka lagu hubiyo cidda soo galaysa Magaaladda, sidaas ayuuna ku soo galay Magaaladda, isagoo aan soo marin Baraha Koontaroolak Magaaaladda laga soo galo.
Cabdiwaal waxa uu u sheegay Kooxda Alshabaab inuu isagu bixinayo dhamaan dhaqaalaha ku baxaya Howlgalkan, kaliya iyagu ay keenaan Ismiidaamiyaha iyo Jaakadda uu isku qarxinayo, taasoo u fududaysay Kooxda inay ku dhiirato Qaraxa Guriceel oo u baahnaa Xog iyo xeelado badan.
Lacagaha uu bixiyay Cabdiwaal ee aan ogaanay waxaa ka mid ah Lacag $3,000 oo uu ku shubay Account Bank oo uu Cali Dhubad oo ah Ninka Ismiidaamiyaha geeyay Guriceel ku leeyahay Bankiga Salaam.
Kooxda Alshabaab illaa iyo hadda kama aysan hadlin qaraxa ka fashilmay, sidoo kale Cabdiwaal oo aan la xiriirnay wuu ka gaabsaday inuu ka jawaabo eedaymaha loo haysto,